नेप्से स्थिर | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेप्से स्थिर
मङ्सिर १४, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव १० प्रतिशत बढेको छ । कारोबार शुरू भएको केही समय बढेको बजार त्यसपछि घटेको थियो । कारोबारको अन्तिम समयमा १ दशमलव ५५ अङ्क बढेर १ हजार ५ सय ३७ दशमलव ६७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २८ दशमलव ६५ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव १० प्रतिशत बढेर रू. १७ खर्ब ८६ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेर ३ सय २४ दशमलव २६ अङ्क पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६४ कम्पनीको ६ हजार ९ सय ३३ पटकको व्यापारमा १३ लाख ५२ हजार ६ सय ४८ कित्ता शेयरको रू. ७४ करोड ६८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३ सय ४७ मा रू. ४ करोड ५५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, रू. ४ करोडको शेयर कारोबार हुने कम्पनीमा बुटवल पावर कम्पनी र चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपाल बैङ्क, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सगरमाथा इन्स्योरेन्स, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश, स्ट्याडण्र्ड चार्टर्ड, नेको इन्स्योरेन्स, र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. १ करोडदेखि रू. २ करोड ९९ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा ६ समूहको परिसूचक बढेको छभने तिन समूहको परिसूचक घटेको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९६ प्रतिशत बढेको छ । साथै, जानकी फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ दशमलव ८५ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६४ कम्पनीमा ६८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छभने ७६ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा ५९ दशमलव ८८ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ८९ रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
१० चैत्र २०७४, शनिबार १३:४२
९ चैत्र २०७४, शुक्रबार १७:५९
९ चैत्र २०७४, शुक्रबार १७:०९